1. Selection: mifanaraka amin'ny haben'ny fanapahana tena izy, safidio izay mety kokoa aminao, ny masinina fitaratra modely2621: 50 * 50 ~ 2440 * 2000mm, maodely 3826: 50 * 50 ~ 3660 * 2440mm, model3829: 50 * 50 ~ 3660 * 2800mm, Model4228: 50 * 50 ~ 4200 * 2800mm Mba handinihana ny fototry ny orinasa ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ilay milina fanodinana vato 45 voadio?
Miaraka amin'ny lazan'ny vato voavolavola, niditra tao an-tsena koa ny fitaovana fanodinana vato manasoka vato, mba hanolorany anao fitaovana fitotoam-bary tena voaaro, 45 degre raha ampitahaina amin'ny fikosoham-bary ...
Inona no atao hoe vato miova ota? Izy io dia tontolon'ny ultra compact vita tanana ho an'ny faharetana. Efa taona vitsivitsy izay no nisy azy io, ka raha mbola tsy namorona azy ianao dia mety ho tonga tsy ho ela. Na izany na tsy izany dia te hianatra manapaka vato voapaika amin'ny fomba mety ianao ...